Sidee bay qoysasku u qeexaan ka qayb qaadashada qoyska ee waxbarashada? Sida ku qanacsan "awoodda dadku in ay bedelaan nidaamyada, ma aha habka kale ee ku wareegsan." Ama si kale haddii loo dhigo, awoodda go'aan gaadhista ee qoysaska iyo bulshooyinka.
Taasi waa mowduuc aan ka maqalnay ku dhowaad 30 wada-hawlgalayaasha beesha oo aan soo ururinnay Bishii Nofeembar si aan u ogaano mawduuca ka qayb qaadashada qoyska, iyo in aan kula talinno ururradeena wadajirka ee ku saabsan sida deeq-bixiyeyaasha ay u taageeri karaan yoolkaas.
Wada-hawlgalayaashan ayaa nagu dhiirrigeliyay in aan xoogga saarno dadaalkeena ku aaddan sidii loo dhisi lahaa awooda qoyska si ay u-doodaan isbedelka nidaamka iskuulada, degmada, iyo heerarka gobolka-oo markaa si kor loogu qaado sinnaanta, fursada, iyo natiijooyinka carruurta Minnesota. Iyadoo miyuusiyaadka iyo sida maalgeliyayaasha MN Soo laabashada, the JD Graves Foundation, Minneapolis Foundation, iyo Xarunta McKnight Foundation, waxaanu ka muuqannay sida latixraaca talooyinkani u saameyn karto shaqadayada.
Maanta, waxaanu ku faraxsanahay in aan wadaagno dhammaan mawduucyada ka soo baxayay kulankooda si loo ogeysiiyo wada-hadallo bulsho oo ballaaran oo ku saabsan hawlgelinta qoyska. Warbixinta cusub, Aqoonsiga & Awoodinta Awooda Qoyska ee Minneapolis-St. Bawlos, ayaa ka tarjumaya xigmadda lamaanaheenna, oo noo sheegay:
Marka hore qoysaska sii iyada oo aqoonsanaysa waalidiinta sida khubaro iyo taageeridda nidaamyada waalidka ee la wargeliyo, isbedelka nidaamka waalidku.
Aqoonsiga arimaha macnaha guud iyada oo la dhibaateeynayo dadaallada isbeddelka dhaqanka (bulshooyinka) gaarka ah ee bulshada iyo xaqiijinta ballanqaadka sinnaanta.
Xasuuso in isbeddelka la badiyey iyada oo la isbarbardhigo baahida degdegga ah si ay ula falceliso ballanqaadka ku-howlanaanta muddada-dheer iyo ka-qaybgalka wajiga aadanaha isbedelka nidaamyada.
Waxaan u maleyneynaa in kaqeybgalayaashu ay si fiican u fahmaan mawduucyadaas. Waxay na siiyeen taladan:
"Isticmaal erayga SEE. Waalidiinta qaarkood waxay dareemaan muuqaal la'aan. Hubi inaan u isticmaaleyno shaqadan marka aan ka hadleyno waxbarashada caruurta. "
"Ka fikir dibadda sanduuqa hagaajinta nidaamka waxbarashada. Waxaan kale oo aan xadideynaa nafteena si aan ugu celino dhibaatooyinka iyo qaladaadka isku midka ah. "
"In la dhiso qaab go'aamineed oo awood u siinaya qoysaska ku nool bulshooyinka dugsiyada."
Waxaan rajeyneynaa inaad akhrido warbixin buuxda, oo ay ka mid yihiin fikrado xooggan oo xooggan, iyo sidoo kale liiska dhammeystiran ee ururrada kaqeybgalayaasha. Aad ayaan ugu mahadnaqaynaa seddexda abaabulayaasha - Roberto de la Riva Rojas Inquilinxs Unidxs Por Justicia, Veronica Mendez Moore ka Centro de Trabajadores Unidos en la Lucha, iyo Nelima Sitati Munene Xirfadda Shaqada Afrika iyo Waxbarashada, Inc- iyo dhammaan wada-hawlgalayaasha beesha oo wadaagay xigmadkooda nala ah.
Dhaqaale ahaan, waxaanu ku ballanqaadaynaa inaan sii wadno wadaagno si aan wax uga baranno sida ugu habboon ee loo aqoonsado loona kordhiyo awooda qoysaska iyo bulshooyinka si loo bedelo nidaamyada waxbarashada. Waxaan rajeyneynaa dukumiintaan iyo ruuxa isku daba-galaya inuu dabka ka dhigo mid la mid ah akhristayaasha.
Rashad Turner waa agaasimihii hore ee Black Lives Matter St. Paul oo ka shaqeeya agaasimaha hawlgalka bulshada ee MN Comeback. Bill Graves waa tiknoolajiyad horudhac ah iyo la taliye hal abuur ah oo u adeega madaxweynaha Graves Foundation. DeSeandra Sheppheard waa shaqaale hore iyo la taliye horumarineed oo ka shaqeeya agaasimaha deeqaha iyo howlgalada Graves Foundation. Erin Imon Gavin waa macallin hore oo ka shaqeeya agaasimaha barnaamijka waxbarashada ee McKnight Foundation. Patrice Relerford waa wariyihii hore ee Star Tribune oo ah agaasimaha istiraatijiyadda saameynta waxbarashada ee Minneapolis Foundation.
Qorayaashu waxay jecel yihiin inay u mahadceliyaan Latosha Cox, kaaliyaha barnaamijka McKnight ee barnaamijka waxbarashadda, iyada oo kaashaneysa qorsheynta iyo taageeridda bulshada.